Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Woyaanaha oo isdagaalay Ayaga Dhexdooda.
Ciidanka Woyaanaha oo isdagaalay Ayaga Dhexdooda.
Wararka naga soo gaadhaya galbeedka Itoobiya ayaa waxay sheegayaan in ciidamada woyaanaha ay dhexdooda dagaalameen kadib khilaaf xoogan oo soo kala dhex galin kaasoo ugu danbayn tii sababay gacan ka hadal.
Dagaalkan ayaa wuxuu ku dhex maray xero wayn oo ku taala magaalada Bahar-dar. Dagaalkan dhex maray ciidanka Woyaanaha ayaa waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyay tiro ciidan ah oo badan sidoo kale waxaa ku dhaawacmay ciidan badan.
Askartan dagaalantay ayaa waxay isu dagaaleen dagaal qoomiyad ku salaysan waxaana dagaalkan bilaabay askar u dhalatay qoomiyada Axmaarads iyo Oromada kuwaasi oo kasoo horjeeda nidaamka kooxda TPLF ee aan ku salaysnayn cadaalada.
Wararkan ayaa waxay sheegayaan in askar badan oo kale xabsiga loo taxaabay oo ay wali xabsiyada ka buuxaan taliska woyaanaha ayaa wuxuu ku jiraa xiliyadii ugu danbeeyay wuxuuna noqon doonaa qaran fashilmay.